Umaki: umarketer | Martech Zone
I-Infographic: Umlando Omfushane Wokukhangisa Kwemidiya Yezenhlalo
NgoMsombuluko, Januwari 1, 2018 NgoLwesine, Agasti 12, 2021 Douglas Karr
Ngenkathi abaningi bezokuxhumana behlanza amandla nokufinyelela kokumaketha kwemidiya yezenhlalo, kuseseyinethiwekhi okunzima ukutholakala ngaphandle kokuphromotha. Ukukhangiswa kwezokuxhumana nabantu yimakethe ebingekho eminyakeni eyishumi eyedlule kepha yakhiqiza imali eyizigidi eziyizinkulungwane ezingama- $ 11 ngo-2017. Lokhu bekusuka ku- $ 6.1 billion nje ngo-2013. idatha yokuziphatha. Kanjalo,
Baphumelela Kanjani Abathengisi Bangaphandle eChina
NgoLwesine, Februwari 23, 2017 NgoLwesine, Februwari 23, 2017 Abhay Singhal
Ngo-2016, iChina yayingenye yezimakethe eziyinkimbinkimbi kakhulu, ezithakazelisayo futhi ezixhunywe ngamadijithi emhlabeni, kodwa njengoba umhlaba uqhubeka nokuxhuma cishe, amathuba eChina angase atholakale kalula ezinkampanini zomhlaba wonke. Uhlelo lokusebenza u-Annie usanda kukhipha umbiko ngomfutho wamaselula, egqamisa iChina njengenye yezimbangela ezinkulu zokukhula kwemali engenayo yezitolo. Khonamanjalo, ICyberspace Administration yaseChina iyalele ukuthi izitolo zezinhlelo zokusebenza kumele zibhalise nohulumeni ukuze
Umsebenzi Wokumaketha Ividiyo
Lwesibili, Disemba 31, 2013 Lwesibili, Disemba 31, 2013 Douglas Karr
Wonke umuntu wenza ukubikezela kwakhe kokuphela konyaka. Ngicabanga ukuthi ungalahla yonke i-hoopla bese usebenza isu lakho lokumaketha kulo nyaka ozayo ngokuya ngawo wonke amaqiniso. Amasu eziteshi eziningi, ezokumaketha ezisebenzisayo, iselula nevidiyo zizoqhubeka nokuqhuba ukuzibandakanya nokuthontelana kwebhizinisi lakho. Nansi i-infographic enhle enezibalo ezimnandi ezisekela isidingo sakho sokusebenzisa isu elisemthethweni lokumaketha ividiyo ngonyaka we-2014. AbakwaDelos Incorporate babelana ngalezi Zeluleko Zokukhangisa Ngevidiyo: Hlela -
NgoMsombuluko, Julayi 8, 2013 NgoMsombuluko, Julayi 8, 2013 Douglas Karr
I-ShoutEm inikeza ipulatifomu yesicelo eselula enezinketho ezahlukahlukene zebhizinisi, ama-ejensi namabhizinisi. Izinhlelo zokusebenza zeShoutEm zinikeza ukuphathwa kokuqukethwe, abakhi bohlelo lokusebenza lwe-smartphone kanye namathebulethi, amathuluzi wokuzibandakanya komsebenzisi, izinketho zokwenza imali nezinqubo zokubonakala zokushicilela. Ama-ejensi angakha izinhlelo zokusebenza zeselula ezisezingeni eliphakeme ngenani elincane lezindleko zokuthuthuka ngokwezifiso ngesixazululo selebuli esimhlophe seShoutEm. Ukutholwa kwe-Adobe ne-eMarketer kwembula ukuthi abathengi abaku-inthanethi banikeza ithuba ngamadivayisi wethebulethi ngaphezu kwama-smartphone lapho bethenga online.